China Stainless Simbi Wood Masitovu Ekubika Mugadziri uye Mutengesi | Ndarama yegoridhe
Saizi: 48.2x25x35.5 cm (isina mapaipi)
Kurema: 3.5 makirogiramu
Rudzi rwemafuta: Wood
Stainless Simbi Wood Masitovu Tsananguro
Unoda gomba remoto asi uine vavakidzani vepedyo vanozonyunyuta nezve utsi? Iyo Nyowani Kusvika Inotakurika Wood Masiteki Ekubika haigone kuve yakanyanya kukuitira iwe. Uyu musiki wekubika huni akagadzirirwa kukupa iwe moto unotinhira usina hutsi hwekunetsa vanhu vepanext door. Saka iwe unogona kutaura zvakanaka kune matambudziko uye njodzi dzekutakura propane. Iyi yekunze chitofu mbiya iri nyore kudzora uye kuchengeteka pane echinyakare mabonfire, uye moto makomba panze haaremi zvakakwana zvekuti unogona kuutakura uchitenderedza nyore.
Stainless Simbi Wood Zvitofu Zvinyorwa
Kuwedzera Saizi: 50x55.1x45.7cm
Kukura Kwehukuru: 48.2x25x35.5cm
Zvekuwedzera Kurudziro: Zvekuwedzera zvekushandisa zvekushandisa, tinokurudzira isina moto bonde. Iyo inokubatsira iwe kudzivirira mars kubva pakuputika, zvichikonzera njodzi dzekuchengetedza.
iyo inotakurika yekubikira chitofu yasara iri inoshanda saizi yekubika yakazara chikafu uye ichipa kudziya pahusiku husiku
Nemamiriro ekunze asingagadzirike, hombe inotakura-inokwana, inogara kwenguva refu, uye maficha anodzivirira ngura. Asi iwe unoda kucherechedzwa, nekuda kwetembiricha yakanyanya kukwirira, iyo simbi isina tsvina inozopedzisira yanyangarika. Kugara wakatarisana nemamiriro ekunze akaomarara kuchawedzera ngura nekutsvukisa asi hakukanganise mashandisirwo akaitwa
Kuyera mukati pa6 kg, kukura kwechitofu chehuni kunoita kuti zvive nyore kurongedza mumakamuri madiki. Izvo zvakakwana kune chero chiitiko chekunze kwekunze kubva kuKayaking kuenda kurongedza zvakare kana kunyangwe kumashure.
Nekuti huni dzehuni dzekubika dzinosiya moto usina-mutsindo, saka unogona kuutora uchidzika musasa pasina dambudziko. Iyo simendi inosimudza gomba remoto kuti iite yakawanda mweya kuyerera pasi, kuti iwe ugone kuishandisa padanda rehuni kana huswa. Iyo yakanakisa yekunze grill inopisa chunk huni kana matanda madiki.
Stainless Simbi Wood Masitofu Mifananidzo
Pashure: Stainless Simbi Grill Yekubika
Zvadaro: Wall Tende Mini Wood Chitofu Nemipendero Yemakumbo
Bindu Kubika Chitofu
Stainless Simbi BBQ
Stainless simbi chitofu
Wood Inopfuta Moto Gomba
Camping Stove Mvura Tangi, Stainless simbi chitofu, Kunze Kwehuni Kunopisa, Musasa Wood Burner, Tende Wood Inopisa Chitofu, Bindu Kubika Chitofu,